दूध उत्पादमा लमजुङ आत्मर्निभर बन्दै – ANMC
दूध उत्पादमा लमजुङ आत्मर्निभर बन्दै
By ANMC Agro | October 27, 2017 | 0
दूध उत्पादमा लमजुङ आत्मर्निभर बन्दै गएको छ । प्रत्येक वर्ष दूध उत्पादनमा बृद्धि भएसँगै जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लमजुङले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय किसानले उन्नत जातका गाइभैँसी पाल्न थालेका छन् । संख्यात्मक रुपमा किसानको संख्या धेरै वृद्धि नभए पनि गुणात्मक रुपमा दूध उत्पादन बढ्दै गएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पुश विकास अधिकृत लक्षमण बहादुर ढकालले बताए ।
लमजुङका बेशिसहर, बाँझाखेतमा भलायखर्क, धमिलीकुवा, दुराडाँडा, परेवाडाँडा सुन्दरबजार, भोटेवडार र रम्घा क्षेत्रका किसानले व्यवसायिक पशुपालन गर्ने गरेका छन् । उत्पादकत्व वृद्धि भएर दूध उत्पादनमा बढेपछि जिल्लाको भोटेवडार, सुन्दरबजार र बेशिसहरमा दूध विक्री हुने गरेको छ ।
४.४३ प्रतिशतले दुध उत्पादनमा बृद्धि
लमजुङमा आर्थिक वर्ष ०७३, ०७४ मा १६ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत खिला शर्मा घिमिरीले बताए । ‘यहाँको दूध उत्पादनको अवस्था हेर्दा प्रत्येक वर्ष दूध उत्पादन हुने मात्र बढेको छ । घिमिरेले भने, ‘अघिल्लो वर्ष भन्दा ३.९ प्रतिशतले दूध उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा १५ हजार ८ सय ६३ हजार चार सय ९० मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएको थियो । लमजुङमा ३० हजार घरधुरीले दुध ,घिउ बेच्ने गर्छन् ।
डेढ अर्व बढीको दूध उत्पादन
तस्बिर : शान्ता कमली / नयाँ पत्रिका
घिमिरेका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा लमजुङमा डेढ अर्ब बढीको दूध उत्पादन भएको छ । लमजुङ बजारमा अहिले चलन चल्तीको दूधको मूल्य औषत ५० रुपैया देखि १२० रुपैयाँ प्रतिलिटर छ । लमजुङमा उत्पादन भएको दूध यहाँका जनसंख्यालाई आवश्यक भन्दा बढि भएको कार्यालयका वरिष्ठ पशुचिकित्सक डा. लक्षमण बहादुर ढकालले बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले एक व्यक्तिका लागि वार्षिक ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्छ भनेको छ,’ ढकालले भने, ‘यहाँ उत्पादन भएको दूध प्रतिव्यक्ति ९४ लिटर छ ।’
किसानहरु उन्नत पशुतर्फ आकर्षित
एउटै लगानीमा धेरै आम्दानी हुने भए पछि किसान उन्नत जातका पशुपालनमा आकर्षित भएका छन् । यहाँका किसानले जर्सी जातका गाई, होलीस्टिन,मुर्रा जातको भैँसी पाल्दै आएका छन् । उन्नत जातका गाइले दैनिक २० लिटरसम्म दूध दिने भएकोले किसानको पहिलो रोजाईमा परेको हो । पशुपालनमा आकर्षित गर्नको लागि अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यालयले व्यवसायीयक रुपमा फर्म सञ्चालन गर्ने कृषकलाई गोठ सुधार, घाँसको विरुवा, बेर्ना, मिल्क एनालाइजर, विद्युतिया मोदानी, भ्याक्सीन तथा जुकाको औषधी ,शिविर र तालिम अनुदानमा दिने गरेको छ ।
कृत्रिम गर्भाभधान गर्ने क्रम बढ्यो
कृत्रिम गर्भाधान मार्फत गर्भाधान गर्ने क्रम बढेको प्रमुख डा. ढकालले बताए । कार्यालयले जिल्लामा एक गाउँ एक प्राविधिक निती समेत लिएको छ । खुदि, सुन्दरबजार,बेशिसहर, भोर्लेटार ,चन्द्रेश्वर ,चक्रतिर्थ, चिती, सोतीपसल ,लगायतका क्षेत्रमा प्राविधिकलाई खटाएर गाई र भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । ‘अहिले वार्षिक करिब दुई हजार तीन पशुमा कृत्रिम गर्भाधान हुने गरेको छ,’ ढकालले भने, ‘उन्नत जातको पशु तयार गर्न यो प्रविधि प्रभावकारी छ ।’
जिल्लामा स्थानिय र उन्नत जातका ८ सय ५६ वटा गाई रहेका छन् । वर्णशंकर जातका ५ सय ३८ र स्थानिय १३ सय ७४ गरी २७ सय ६८ वटा दुहुना गाई रहेका छन् । जिल्लामा स्थानिय जातका भैसी १० हजार ७ सय १८ ,वर्णशंकर जातका ४ हजार ५ सय ७५ र उन्नत जातका १ हजार ५ सय गरी १६ हजार २ सय ९८ दुहुना भैसी रहेका छन् ।
पशु विमाबाट किसान लाभान्वित
पशुपालनमा क्षती न्युनिकरण गर्न यहाँका किसानले पशुको विमा गर्न थालेका छन् । गाई भैंसीको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा रोगव्याधीबाट पशु मरेमा क्षतीबाट जोगिन किसानले पशु बिमा गर्न थालेका हुन् । ‘थोरै प्रिमियम तिरेर बिमा गर्दा पशुको मृत्यू भएमा किसानलाई कम भार पर्छ,’ प्रमुख डा. ढकालले भने,‘व्यवसायीक पशुपालन गर्ने किसानलाई पशु बिमा अनिवार्य भएको छ ।’
पशु विमा कार्यक्रममा किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि छ । स्थानीय सहकारी र समुहमा नै बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । वार्षिक प्रिमियम बुझाएर बिमा गर्न किसान उत्साहित छन् । किसानले उठाएको प्रिमियम रकममा पशु कार्यालयले समेत अनुदान स्वरुप रकम थप्ने गरेको छ ।
किसानले पशुको मूल्यको तीन प्रतिशत प्रिमियम शुल्क बुझाउँछन् । पशु मरेमा कुल मूल्यको ९० प्रतिशत र बाँझो भएमा ५० प्रतिशत रकम किसानले पाउँछन् । १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने भैँसीको वार्षिक १८ सय ७५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
जिल्लामा ७ वटा विमा कम्पनिसँग विमा गरीएको डा. ढकालले बताए । १ लाखको विमा गर्दा किसानले ५ प्रतिशत अर्थात ५ हजार तिनुपर्ने हुन्छ जसमा ५ हजारको ७५ भाग सरकारको र बाकी सरकारले र किसानले १ लाखको विमा गर्दा १२ सय ५० रुपैयाँ वुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
दुग्ध प्रसोधन केन्द्र स्थापना
जिल्लाका मध्यभागमा रहेको सुन्दरबजार न.पा वडा नम्बर ८ भोटेवडारको धारापानीमा दुग्ध प्रसोधन केन्द्र स्थापना भएको छ । आरभा नेपाल मोर्डन एग्रीकल्चरले जिल्लामा उत्पादित दुधलाई प्रसोधन गर्नका लागी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको हो । २०७४ साउन महिनाबाट सो केन्द्र सञ्चालनमा आएको आरभा नेपालका अध्यक्ष विनोद घिमीरेले बताए ।
उनका अनुसार, हाल प्रतिदिन २ हजार लिटर दुध केन्द्रमा प्रसोधन गरीनेछ । उक्त दुग्ध प्रसोधन केन्द्रमा आगामी दिनमा १० हजार लिटर दुध प्रशोधन गर्ने क्षमता रहेको छ । उक्त प्रसोधन केन्द १ करोड भन्दा बढिको लागतमा स्थापना गरीएको आराभा नेपालका अध्यक्ष घिमीरेले बताए ।
दुग्ध प्रशोधन केन्द्रले दुग्ध व्यावसायको विकासलाई तिव्र गतिमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरीएको छ । दैनिक ५० लिटर दुधबाट संकलन सुरु गरीएको केन्द्रमा हाल दैनिक ७ सय लिटर भन्दा बढि दुध संकलन हुन थालेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख डा.ढकालले बताए । कम्पनीले पहिलो चरणमा लमजुङकै स्थानिय पशुपालक किसानको मेहनतमा उत्पादित दुग्ध प्रसोधन केन्द्रमा प्रसोधित गरीएको छ ।
लमजुङकै चिती, कोइरलाफाँट, बोरङखोला, नौथर शेरा, अर्चलबोटका किसानले उत्पादन गरेको दुध उक्त दुग्ध प्रसोधन केन्द्रमा ल्याउने गरीएको आरभा नेपाल मार्डन एग्रीकल्चर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक एवंम् प्रशांसनिक प्रमुख कृष्ण प्रसाद बजगाइँले बताए । आरभा नेपालले जिल्लामा ९ वटा दुग्ध संकलन समुह समेत निर्माण गरेको छ ।